Jimce Madaw oo qas ka taagan London iyadoo darawalada Tube-ka ay shaqo joojin ku sameeyeen
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka UK » Jimce Madaw oo qas ka taagan London iyadoo darawalada Tube-ka ay shaqo joojin ku sameeyeen
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Safarka Tareenka • Waajib ah • Ammaanka • Shopping • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK
Socodka socodku wuxuu hakad galiyay adeegyadii London oo dhan jimcihii Madow, oo ah mid ka mid ah maalmaha wax iibsiga ee ugu mashquulka badan sanadka, iyadoo iibku ka socdo dukaamo badan.
Wadayaasha tareenada dhulka hoostiisa mara ee London oo midaysan ayaa sameeyay shaqo joojin balaadhan Jimcihii Madow, iyaga oo ku andacoonaya in socodka uu ka dhashay "jeexjeexa heshiisyadii jiray iyo qabanqaabada shaqada ee ka hor furitaanka Tubada Habeenka."
Gaadiidka shanta waaweyn London Khadadka Tube-ka – Bartamaha, Jubilee, Waqooyiga, Piccadilly iyo Fiktooriya – waxaa saameeyay shaqo joojinta la isku dubariday ee maanta, halka qalalaase badan oo nidaamka gaadiidka caasimadda Ingiriiska la filayo dhammaadka usbuuca.
Marka loo eego Ururka Rail Maritime and Transport Union (RMT), ee hormuudka ka ahaa shaqa joojinta, qaar badan oo ka mid ah xubnahooda ayaa ka xumaaday qaababka cusub ee isbeddelka.
Gaadiidka London (TfL), hay'adda dadweynaha ee mas'uulka ka ah gaadiidka dadweynaha ee magaalada, ayaa muujiyay sida ay uga xun yihiin go'aanka RMT. Qoraal uu soo saaray. TfL ayaa sheegay in liisaska cusub lagu soo bandhigay darawallada Tube-ka bishii Ogosto oo ay ku jiraan tiro dammaanad ah oo la siiyay shaqaalaha oo ku saabsan amniga shaqada.
Socodku wuxuu hakiyay adeegyadii guud ahaan London Jimcaha Black Friday, oo ah mid ka mid ah maalmaha wax iibsiga ee ugu mashquulka badan sanadka, iyada oo iibku ka socdo dukaamo badan. Qaar ka mid ah ka qeyb galayaasha shaqo joojinta ayaa la arkayay iyaga oo ku xareynaya saldhigyada iyaga oo wata boorar iyo calamo.
LondonDuqa magaalada ayaa sidoo kale ka hadlay socodkii. "Ficilkan shaqo joojinta ah ee aan loo baahnayn ee RMT waxa uu khalkhal baahsan ku keenayaa malaayiin reer London ah wuxuuna sidoo kale garaaci doonaa tafaariiqda, dhaqanka iyo soo dhawaynta London wakhtiga ugu xun," Sadiq Khan ayaa ku yidhi Twitter-ka.
Shaqo joojinta ayaa sii socon doonta sabtida, iyadoo la qorsheeyay socodyo badan inta lagu guda jiro soo dhawaada Christmas-ka.
"macaamiisha u baahan inay ku safraan iyagoo isticmaalaya TfL adeegyada waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan ka hor inta aysan safrin, oo ay u oggolaadaan waqti badan safarkooda, oo ay safraan waqtiyada aamusnaanta halka ay suurtagal tahay," TfL ayaa tiri, isaga oo intaa ku daray in dadka ku nool Bartamaha London waxaa lagula talinayaa "in aad lugayso, baaskiil ku wado ama isticmaasho mooto elektroonik ah oo kirada ah" halkii aad isticmaali lahayd tuubada.